Nin Ilaalo u ahaan jiray Osama Bin Ladin oo laga musaafuriyay Jarmalka | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Nin Ilaalo u ahaan jiray Osama Bin Ladin oo laga musaafuriyay Jarmalka
Dowlada Jarmalka ayaa maanta dalkeeda ka musaafurisay nin kasoo jeeda dalka Tuniisiya oo mar ahaan jiray waardiyaha gaarka ah Hogaamiyihii la dilay ee Ururka Al Qaacida Osama Bin Ladin.
Waxaa maanta garoon ku yaalla magaalada Düsseldorf ee dalka Jarmalka diyaarad laga saaray Sami A oo sanado badan dalka Jarmalka kula noolaa Qoyskiisa, waxaana masaafurintan ninkna ay dhacday xili Maxkamad amartay in aan la musaafurin Sami.
Sargaal ka tirsan maxkamadda amartay in Sami aan la musaafurin ayaa sheegay in go’aanka maxkamada la gaarisiiyay xukuumada xilli dambe taasi oo sababtay in dowlada si deg deg ah u musaafuriso ninkan.
Ninkan mar kamid ahaa ilaalada gaarka ah ee Sheekh Osama Bin Ladin ayaa dalka Jarmalka galay sanadkii 1997-dii, waxaana tan iyo xiligaasi Sami uu qoyskiisa kula noolaa magalao kutaala dalka Jarmalka .
Booliiska dalka Jarmalka ayaa ninkan xiray dabayaaqadii bishii hore ee June kadib markii Waaxda Socdaalka dalka Jarmalka ay go’aamisay in la musaafuriyo, dowlada Jarmalka ayaana sheegtay in ninkan halis ku yahay amaanka dalkooda.
Sami ayaa horey dowlada jarmalka uga codsaday in aan la musaafurin, waxa uuna ninkan sheegay hadii lagu celiyo dalka uu kasoo jeedo ee Tunuusiya in uu la kulmayo jirdil iyo dhibaatooyin kale.
Warbaahinta dalka Jarmalka ayaa ka gaabsaday in ay baahiyaan magaca buuxa ee ninkan sababo la xariira shaqsiyadiisa, waxa uuna ninkan Jarmalka laga musaafuriyya horey u beeniyay in xiriir la leeyahay kooxaha jihaad doonka ah.